Nockherberg Starkbierfest - မြူးနစ်ခိုင်ခံ့ဘီယာပွဲတော် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > Nockherberg Starkbierfest – မြူးနစ်ခိုင်ခံ့ဘီယာပွဲတော်
အများစုမှာဘီယာ-မေတ္တာရှင်ခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏-လုပ်ဖို့စာရင်းတွင်မြူးနစ်မြင့်မားများ. ဒါဟာ Oktoberfest လည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ပေးထားရဲ့, ဒါပေမယ့် Nockherberg Starkbierfest – မြူးနစ်ခိုင်ခံ့ဘီယာပွဲတော်အပိုတစ်ခုခုယူဆောင်လာ. အဘယ်သူမျှမ, မရလူအစုအဝေး. သငျသညျလိမ့်မယ် အတှေ့အကွုံတစ်ဝက်အဖြစ်အများအပြား. ဒါပေမယ့်ဘီယာခွန်အားနှစ်ဆဖြစ်ပါသည်! ပယ်ကန်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းကဲ့သို့မြည် မတ်လ နှင့် နွေဦး, ကျွန်တော်တို့ကို!
မြူးနစ်, Bavaria ရဲ့မြို့တော်, ရာစုနှစ်များစွာအရွယ်အဆောက်အအုံများမှနေရာဖြစ်သည်နဲ့ မြောက်မြားစွာပြတိုက်. အဆိုပါမြို့က၎င်း၏နှစ်ပတ်လည် Oktoberfest အခမ်းအနားနှင့်၎င်း၏ဘီယာခန်းမများအတွက်လူသိများသည်, အဆိုပါကျော်ကြားတဲ့ Hofbrauhaus အပါအဝင်, ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1589. အဆိုပါ Altstadt အတွက် (မြို့ဟောင်း), Marienplatz အလယ်ပိုင်း စတုရန်းတွင်အထင်ကရနေရာများပါရှိသည် Neo-Gothic Neues Rathaus ကဲ့သို့ (မြို့တော်ခန်းမ), 16 ရာစုကနေပုံပြင်များ chimes နှင့် reenacts တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ glockenspiel ပြပွဲနှင့်အတူ.
ဒီမြူးနစ်သွားရောက်လည်ပတ်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါသည်? သင်ကအလွန်ဧည့်သည်-ဖော်ရွေမြို့ကြောင်းကိုသိရန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်, နီးပါးတိုင်းရှုထောင့်ထဲမှာ. ဒါဟာအလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့ရှိပါတယ် အခြေခံအဆောက်အဦများ, ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းကမ်းလှမ်း မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပဆွဲဆောင်မှု, ရာသီဥတု၏မြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများထက်ပျော့ဖြစ်ပါသည် ဂျာမနီ ထိုသို့စူပါင် လှည့်ပတ်ရရန်မလွယ်ကူ နှင့် Nockherberg Starkbierfest ရ – မြူးနစ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဘီယာပွဲတော်.
ဂျာမန်သို့မဟုတ် Bavarian စကားမပြောပါနှင့်? ပြဿနာမရှိပါဘူး! အငယ်မျိုးဆက်အများစုမှာအင်္ဂလိပ်ပြောတတ်, ဒါပေမယ့်ဂျာမန်တစ်နည်းနည်းအသုံးချနိုင်ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်ပင်ဘာသာစကား Bavarian, သငျသညျဝံ့လျှင်) မြင့်မားသဖြင့်တန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ် ဒေသခံတွေ. တိုင်းပြည်မိတျဆှေသဘောမရှိသောဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်, သို့သော်ယခုအချိန်အထိအမှန်တရားကနေဖွင့်. သူတို့ကိုသင်သိထားရန်လာပြီ start တစ်ချိန်ကမြူးနစ်ကဖော်ရွေများနှင့်အထောကျအကူဖြစ်ကြောင်း. ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဒြပ်စင်တစ်ခုမှာ “ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်” ဘယ်လောက်ပင်အလုပ်အများဆုံးမြို့လယ်ဧရိယာများရှိစေခြင်းငှါ, ကသေးနင်္လာမှသောကြာရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလညဥ့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်ရနိုင်; မြူးနစ်မြို့ဘဝများစွာကိုအပြစ်တွေပူဇော်နိုင်ပါတယ် (ကြီးမြတ်စားသောက်ဆိုင်, လှပသောအဆောက်အဦးများ, များများ လုပ်စရာများ) Hustle ၏အနုတ်တွေအများကြီး, ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှား, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု. ဤမြို့သည်အများအပြားကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံး features: တစ်ခုမြို့ပြ ပတ်ဝန်းကျင်, လှပသောသဘာဝအလျောက်ပတ်ဝန်းကျင်, အများအပြားရိုးရာနှင့်အတူ blended ကွဲပြားခြားနားနှင့်နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှု အသက်တာ၏ဘာသာစကား Bavarian နည်းလမ်းများ. ထိုသို့ဘီယာတစ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကမ္ဘာကျော်ကြောင်းပြောနေစရာမလိုဘဲဝင်!
https://www။youtube။com/watch?v = GwBfUzPCiaw
အစောပိုင်းနွေဦးရာသီ၌လှည့်ပတ်သုံးပတ်, အားလုံးမြူးနစ်ဖြတ်ပြီးဘီယာ၎င်းတို့၏ဘီယာခန်းမကို set up.
ခိုင်ခံ့သောဘီယာပွဲတော်ဘီယာဥယျာဉ်နှင့် Oktoberfest တူသောမြူးနစ်ပိုင်. တကယ်တော့, ဤဘီယာပွဲတော်သည်မြို့၏ဖြစ်နိုင်သည် အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက်. ဒါဟာအမှန်တကယ် Oktoberfest ထက်ပင်အဟောင်းတွေရဲ့, ၁၆၀၀ ခုနှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်, မြူးနစ်ရဲ့ Paulaner သံဃာတော်များနှင့် Paulaner Nockherberg အားဖြင့်မြူးနစ်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ဘီယာပွဲတော်များအတွက်မူရင်းနေရာဖြစ်ပါသည်!
အဆိုပါလိမ္မာသည် ဖြစ်. သံဃာတော်များဥပုသ်အစာရှောင်ခြင်းမှတဆင့်ကသူတို့ကိုဆက်ထိန်းရန်ဘီယာအဖျော်ယမကာကွံ, နှင့်၎င်းတို့၏ရွေး-ငါ့ကို-up, '' မင်္ဂလာရှိဖခငျ၏ဘီယာ 'သို့မဟုတ်' 'စိန့်တို့၏သန့်ရှင်းသောရေနံကိုခေါ်. Francis က ''. နောက်ဆုံး, ကယ်တင်သောသခင်အဘို့အလက်တင် - သူတို့ '' Salvator ကမူ '' ပေါ်အခြေချ.
၏အများဆုံးပြောသည်မူရင်းပုံပြင် starkbier ဆာလောင်မွတ်သိပ်သံဃာရိုးရှင်းတဲ့ပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်. ဥပုသ်ကာလအတွင်းအစာရှောင်ခိုင်း, ဘုန်းကြီးတွေကယ်လိုရီသူတို့ရဲ့ဝစွာရရှိရန်တစ်ကွက်လမ်းအဖြစ် starkbier စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်စတင်. တစျဖနျ, မြင့်မားဖျက်သိမ်းစိုင်အခဲ content တွေကိုကျေးဇူးတင် (အဖြစ်လူသိများ wort), starkbier အရည်အစားအစာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်.
သို့သော်ကျော်လွန်, Starkbier မ, ဒါပေါ့, မြင့်မားအရက်အကြောင်းအရာများ (ကနေအထိ 7.5%-9%). အရသာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် malty နှင့်ဖွင့် (ဖြစ်ကောင်းငါ deceivingly လို့ပြောသင့်ပါတယ်) ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လိမ့်မည်ဧကန်အမှန်အက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ 1000% သင်တို့အပေါ်မှာပုတ်. ကဲ့သို့, "ကျေးဇူးပြုပြီးတွေများ, စားပွဲပေါ်ကခုန်ရပ်တန့် - သင်အပေါ်အမြိုးသားအ "ပုတ် scaring နေ. သငျသညျသတိပေးခဲ့သည်ပြီ.
အမှုအရာတက် Sum မှ: starkbier အားကြီးသောဘီယာဖြစ်ပါသည်, ပိုအားသန်တယ် အရက်ပါဝင်မှု ဒါပေမယ့်လည်းပျော်ဝင်နေသောအစိုင်အခဲများတွင်, သင်ထသင်တက်ဖြည့်ပါနှင့်ရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်. သငျသညျသတိပေးခဲ့သည်ပြီ!
အဓိကစူပါမားကတ်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်နေစဉ် ဆိုင်များတွင်သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်, မြူးနစ်ရှိစားသောက်ဆိုင်များနှင့်စတိုးဆိုင်အများစုသည်ငွေသားသို့မဟုတ် EC ကတ်များကိုသာလက်ခံလိမ့်မည် (ဒက်ဘစ်ကဒ်နဲ့တူရာများမှာ). သငျသညျနေ့စဉျအသုံးပြုမှုများအတွက်သင်နှင့်အတူအလုံအလောက်ယူရိုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ.
အဆိုပါ Starkbieranstich ၏အစေးထွက်ရှိကိုရည်ညွှန်းသည် ခိုင်မာတဲ့ဘီယာ (တနည်း. အဆိုပါ keg နှိပ်) - ကမြူးနစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးကိုဖွင့်ခြင်းနှင့် Starkbierfest ရဲ့ start ခြေတစ်လှမ်း. Paulaner နံနက် Nockherberg မှာ, သူတို့တစ်တွေဂီတနိုင်ငံရေးအကင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Salvator ကမူအားကြီးသောဘီယာအစေးထွက်ရှိဆင်နွှဲ.
ပြည်သူ့စာသားဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဘီယာခန်းမဖြည့်ခြင်းနှင့်သီချင်းနှင့်သိသိသာသာမှတဆင့်သူတို့ထဲကပျော်စရာပါစေ. သငျသညျအဘယျသို့ထွက်စစ်ဆေးနေအရိုးစုကိုထားလျှင် ထိုအဖြစ်အပျက် တူ၏, ဤနေရာတွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေ YouTube ကိုကလစ်ဖြစ်ပါသည်.
မြူးနစ်မှရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ချင်? ထိုအခါမှကိုကျော်ပေါ်ဦး SaveATrain သငျသညျအဘယ်သူမျှမ peaky နှင့်အတူမိနစ်၌သင်တို့၏လက်မှတ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ, အပိုဆောင်း, နှင့်ဝှက်ထားသောအခကြေးငွေ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#Beerfestival	#NockherbergStarkbierfest	#ခိုင်မာတဲ့ဘီယာစေးထွက်ရှိ	#TraveltoMunich	ဝက်ဝံခရီးသွား	သောက်စရာပွဲတော်	မြူးနစ်